Kulula ukufumana indoda-ntokazi kumlingane wobomi. Into ephambili kukuba ube nomonde kwaye ubonise ingqwalasela kunye nokunyamekela. Ubunzima bokujongana neVirgo kunokuba kukuba aba bantu abaqhelekanga ukwabelana ngamava abo angaphakathi. Ngoko ukuba uthe wagqiba ukubonisa iimvakalelo zakhe kuwe, kubalulekile ukumbonisa ukuba uyayithanda kangakanani. Ukugcina le ndoda, kulungele ukusetyenziswa kwinto yokuba ingenalo uthando, ukuhlaziywa kunye neento zonke ezingahambisani nokuqonda kunye nokuqonda. Virgo yinyani. Ukuba ufuna ukumenza ube ngumntu othandana naye, ngoko unokukhawuleza ukuyeka le nto engenamsebenzi. Kuye kubaluleke kakhulu ukuba indlu ihlambuluke, kwaye intanda yakhe yayithembekile kuye. Kodwa kule meko unokuqiniseka ukuba i-satelesi enjalo iya kukunika imfudumalo, uthando kunye nokunyamekela.
Iimpawu zobume beNtombikazi
Ukunyaniseka nokunyaniseka kwakhe, umnqweno wokwakha ulwalamano olucocekileyo ufanelekile ukugcina indoda enjalo kufuphi naye. Ukuba ngumfazi ococekileyo kwiNtombikazi kuthetha, okokuqala, ukuhlonela iimfuno zakhe, ukhetho kunye nezinto ezikhethiweyo zehlabathi langaphakathi.
Ukusebenza kunye nokuqinisekiswa kobuchule akufanelekanga. Ujonge ngeengqondo zonke izinto ezizungezile. Ngokuqhelekileyo kunokubonakala ngathi ukhethiweyo wakho ukhulile ngokupheleleyo kuwe, kodwa, njengommiselo, ukungabikho kwengqwalasela kubonisa kuphela ukuba lo mntu akazithobeli ukubonakalisa ukuvakalelwa.
Ukuba awukwazi ukufihla ukuqonda kwakho, ukulungela ukuphupha, kungcono ukuba ungabonakali ukuziphatha okunjalo xa iVirgo.
Uxanduva lomntu walo mqondiso uvame ukufikelela kwindawo edibeneyo. Uvakalelwa ngumthwalo wakhe, kodwa ukhethwe ngumntu okhethiweyo akayi kufuna ukuba nomoya onzima.
Yintoni omele uyihlawule ngayo
I-Virgo yindoda iyahlukaniswa ngokusemthethweni, ukuhamba ngeendlela kunye nokucoceka kuzo zonke iindawo. Yingakho engabonakaliyo kunye nabameli bobulili obuhlukile. Kwaye ukuba unika ingqwalasela, uchitha ixesha kunye nawe, ubekahlukana nabo bonke oomama abakujikelezile, ke ugcine engqondweni ukuba ubona kuwe umngane wobomi.
Ukuba unqumle ukudibanisa ubomi bakho kunye nomntu waseVrogo, kufuneka wamukele ukungabi nantando kunye nokuthabatha kule nxulumano. Unobuninzi obuninzi obuxabisekileyo kumadoda. Unokuqiniseka ukuba uyakwazi ukwakha ubomi bakhe, kwaye ngexesha elifanelekileyo uya kukungqongeza ngokunyamekela, ukunakekelwa kunye nenkxaso.
Indlela yokujamelana ne-Virgo yindoda?
Ukugcina indoda-intombazana ofuna ukuba ibe ngumfazi ofanelekileyo kunye nenkosikazi. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ekuhlambulukeni kunye nokuhlelwa kungekhona kuphela endlwini, kodwa kunye nobudlelwane nomntu. Ngokukhawuleza kufuneka ubonise ukuba uya kuhlangabezana nendima yomfazi kwiNtombikazi. Kakade ke, akukho nto ekumtyhola ngayo malunga nokuyilwa komanyano okanye umtshato. Kwimeko yokunxibelelana neVirgo, iziganeko ezibalaseleyo ziyimonde kunye nococeko. Ukubonakaliswa kwezi mpawu, uya kuba nombulelo kuwe.
Ubuhlobo obusondeleyo kunye neVirgo kufuneka uqaphele kwaye luchaneke. Ukucinga okugqithisileyo kunokusongela umthandi kwaye uvale ngaphakathi kuye. Ukugxeka kunye neembono ebhedeni - isifundo somxholo wale hlobo lamadoda.
Ukunyaniseka kumfazi yinto ebalulekileyo ukuba indoda yaseVirgo ixabise. Ukuze ube ngumlingane onobuhle, kulungele ukuhlala ukhohlwa ngokudlala ngothando namanye amadoda, iingxoxo zefoni, iintlanganiso kwiikhofu yekhofi.
Umele ube ngumntu onobuqilileyo nothembekileyo okhethiweyo wakho. Emva kokumrhalwa ngothando, ukunyamekela, ukuqonda, ukucoceka ngaphandle kokuphazamisana nehlabathi lakhe langaphakathi, unokumgcina ubomi. Indoda-Virgo yinto yokufumana ngokwenene abo baxabisa ukuthembeka nokuzithemba kobudlelwano.
Umyeni wam akanamandla, ndimele ndenze ntoni?
Ukuqhelana nentombazana, indlela yokuyifunda?
Kuthekani ukuba umyeni wam akafuni umntwana?
Iimfihlakalo zengqondo yesintu
I-Biography: Ophezulu uSergey Bodrov
Khetha izipho zokuqala ezivela eLefutur
Umfanekiso kwindlela yesiGrike
Ukukhetha i-mascara epheleleyo ye-eyelashes
Ukutya ukuze ulahlekelwe isisindo u-Alexey Kovalkov
I-Shar pei enamahlathi: ukukhulisa nokunesi
Isaladi kunye nesaladi ye-rocket, i-almond kunye neerinki
Iipropathi zokwelapha kunye nokuchasene kwiingcambu
Ukubandakanywa kwabantwana abadala ekuzimeleyo kwabazali